BUSINESS ADVISORY - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော – Lawyers in Nigeria.
OIL & သဘာဝဓာတ်ငွေ့
The Lex Artifex’s Trade & Investment Advisory Group represents Nigerian and international clients inabroad spectrum of corporate and commercial law matters, covering issues relating to company formation, joint ventures, licensing, အခွန်ကောက်ခြင်း, business immigration, due diligence, regulatory compliance, private equity funding, debt financing, intellectual property filing and enforcement, အခွန်ဌာန, နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု, international trade and foreign direct investments.
To learn more about our advisory services, တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် lexartifexllp@lexartifexllp.com. အဆိုပါရှေ့နေများဘာသာစကားဘာသာပြန်များမှတဆင့် Non-အင်္ဂလိပ်စကားပြော clients များနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့အလုပ်အတွက်တတ်ကျွမ်းများမှာ.
Lex Artifex LLP ရဲ့ကုန်သွယ်ရေး & ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေး Group မှ
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ File ကိုဘယ်လို
နိုင်ဂျီးရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေခိုင်မြဲသော:7ကျနော်တို့တင်ပို့သူများနှင့်ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကိုဖွင့်ဖို့ကိုကူညီပါနည်းလမ်းများ
Lex Artifex LLP., providesawide range of timely and cost-efficient integrated legal solutions to its clients both internationally and in Nigeria. The firm’s practice areas include corporate and commercial law, regulatory compliance, due diligence, real estate, joint ventures, mergers & acquisitions, investment advisory, အခွန်ကောက်ခြင်း, ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးန်ဆောင်မှုများ, ကြွေးမြီပြန်လည်နာလန်ထူ, shipping & maritime, immigration, ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအရာ, estate planning and probates, and employment law.
© 2020 Lex Artifex LLP. - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော. WordPress Theme : Eightlaw Lite by 8Degree Themes